Hiran State - News: Sidey u arkaan shacabka Hiiraan qorshaha ay reer Puntland horboodayaan ee dalka looga hirgalinayo 18kii gobol ee ay dowladii Kacaanka sameysay.
Sidey u arkaan shacabka Hiiraan qorshaha ay reer Puntland horboodayaan ee dalka looga hirgalinayo 18kii gobol ee ay dowladii Kacaanka sameysay.
HS:-Sidey u arkaan shacabka Hiiraan qorshaha ay reer Punt;and horboodayaan ee dalka looga hirgalinayo 18kii gobol ee ay dowladii Kacaanka sameysay iyadoo xiligaasi tuulooyin laga dhigay gobolo.hadaba xiriiro kala duwan oo aanu la yeelanay qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan iyo jawabo aad u sahlan oo ay intooda badan ka dhawaajiyeen.
Maalmahan waxaa batay warar intooda badan ay suuqa ku soo deeyeen taageerayaal u badan reer Puntland oo meelaha ay iskugu yimaadaan bulshada Somaliyeed amaba waayadan dabe loo bixi fadhi ku dirir la maraya firkado u badan sidey iyagu jeclaayeen iyagoo ku haminaya in Somaliya laga hirgaliyo 18kii gobol ee ay horey u sameeyeen dowladii kacaanka oo sida laga warqabo xiligaasi iyadoo u daneyneysa qaar ka mid ah beelaha Somaliyeed si maanta oo kale jiilka imaanayo loo qaldo iyadoo xiligaasi tuulooyin laga dhigay gobolo sida Sool, Sanaag iyo Nugaal. halka sidoo kale inta badan la kala googooyey 7 ka mid ah 8dii gobol ee uu wadanku ka koobnaa waayadii hore marka laga reebo Hiiraan oo ah gobolka kaliya ee maanta ah mid aan la kala googooyn amaba aan laga dhigin dhawr gobol taasi oo ay aad ugu faraxsan yahiin bulshada Hiiraan oo iyagu go,aanka iyo sida mustaqbalka Hiiran laga yeelayo ay ku xiran tahay.
Hadaba waxaanu warbxin xaqiiqada u dhaw ka soo aruurinay bulshada Hiiraan dal iyo dibadba nasiib wanaag waxey jawaabtii ku soo koobeen 3 qodob oo kaliya.
1- Waxey yiraahdeen marka hore TFGda waa kumeel gaar waxna ma bedeli karto waxne kuma dari karto siyaasada dalka oo ma ahan dowlad rasmi ah reer Hiiraan waxey la maacaamilayaan dastuurka uu yeelan doono wadanka marka laga gudbo xiliga kumeel gaarka.
2- Hadii ayba dhacdo maba dhici doontee in lagu socodo 18kii gobol ee ay sameysay dowladii Kacanka oo ugu danbeysay waxba dowlad rasmi ah la dhihi karo waa in marka hore gobolada Somaliya laga dhigaa 21 gobol oo Hiiraan oo ka danbeysa goboladii hore ee Somaliya ee ahaa 8da gobol in iyadane laga dhigaa 3 gobol kedibna Somaliya oo leh 21 gobol intii isku darsoomi karto isku darsoomaan.
3-Dastuurka qabyo qoraalka ee ay TFGda mudada labada sano ah wado shacabkii aanu fikradaha kala duwan ka soo aruurinay wax lur ah kuma hayo waxuuna hadalkooda u badanaa Hiiraan cid lagu darayo ma jiri doonto waa in Galgaduudna Mudug raacdo Sh/dheena Banaadir raacdo 8dii gobol ee dalka ka jiri jirayna la soo celiyo inta ka horeyso cidkasta waa u furan tahay iney sidey iyada jeceshay u hadasho ayeyna ku soo qatimeen.
Isku soo duuboo waxkasta oo ay ku dhiiradaan TFGDa Hiiraan iyo bulshadooda umaba arkan dowlad jirta oo go,aankeda ka shaqeynayo dalka xitaa hadey idaacadaha ka dhahaan waxaa dowlad goboleed noqon kara labo gobol iyo ka badan iyo wax la mid ah. iyagoo hadalkooda soo gabo gabeynayo waxey ku soo qatimeen shaqsiyaadka reer Hiiraan ee meelaha fadhi ku dirirka loogu keeno siyaasadaha iyo fikradaha reer Puntland waa ineysan ku gadsoomin ayaana hadaladooda ka mid ahaa shaqsiyaadka qaarkood.
Bulshada Hiiraan oo udub dhaxaad u ah siyaasada Somaliya ayaa iyagu hada ku mashquulsan sidii Hiiraan loogu heli lahaa Deked ka dhaw mida ay hada isticmaalaan ee loo aado Puntland kedib markii ay fikir aad loola dhacay ay soo jeediyeen dhawaantan aqoonyahano reer Hiiraan ah si ganacsiga iyo horumarka mustaqbalka Hiiraan u noqdo mid leysku haleyn karo.
· admin on September 19 2011 10:40:14 · 0 Comments · 3361 Reads ·
14,585,763 unique visits